Ihe Iwu Kwuru Ị Na-agaghị Eme | JW.ORG
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Ahanta Aja Albanian Albanian Sign Language Alur Amharic Arabic Arabic (Iraq) Arabic (Jordan) Arabic (Lebanon) Arabic (Syria) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Attié Aukan Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bariba Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Toba) Bengali Betsimisaraka (Northern) Betsimisaraka (Southern) Bicol Bidayuh (Bukar) Bislama Bissau Guinean Creole Blackfoot Bomu Bosnian British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chichewa Chilean Sign Language Chin (Falam) Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinamwanga Congolese Sign Language Croatian Croatian Sign Language Czech Dagaare Dangme Danish Dari Diola Dogon (Toro So) Douala Drehu Dusun Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Edo English Esan Estonian Estonian Sign Language Ethiopian Sign Language Ewe Fante Faroese Fataluku Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Frisian Fulfulde (Cameroon) Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Guerze Gun Guéré Haitian Creole Haya Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Irish Irish Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kadazan Kalanga (Zimbabwe) Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kisi Kongo Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Kyangonde Latgalian Latvian Latvian Sign Language Lingala Lithuanian Logo Loma Low German Luganda Macedonian Macushi Madura Mahorian (Roman) Maithili Makasae Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Mam Mambae (Ermera) Mandinka Mandjak Mangbetu Maninkakan (Eastern) Mano Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazahua Mende Meru Mingrelian Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nambya Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nepali Sign Language Newari Ngangela Nias Nigerian Pidgin Niuean Nivaclé Norwegian Nyaneka Nzema Obolo Oromo Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papel Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pehuenche Pemon Pennsylvania German Persian Piaroa Pidgin (Cameroon) Pilagá Polish Polish Sign Language Pomeranian Portuguese Portuguese (European) Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quechua (Huaylla Wanca) Quichua (Chibuleo) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romany (Albania) Romany (Argentina) Romany (Eastern Slovakia) Rungus Runyankore Russian Rutoro Saramaccan Sarnami Scottish Gaelic Sehwi Senoufo (Cebaara) Sepedi Serbian Serbian (Roman) Serer Setswana Seychelles Creole Shona Shuar Shughni Sidama Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Susu Svan (Lower) Svan (Upper) Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Toupouri Turkish Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Voru Wallisian Welsh Wichi Wolof Xhosa Yoruba Yukpa
Ihe Iwu Kwuru
Ikike Ịgbanwe Ihe
© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Naanị anyị ka ikike ịgbanwe ihe ọ bụla n’ebe a dị n’aka.
Ọ bụ Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) na-etinye ihe n’ebe a, ọ bụkwa ha na-elekọta ya. Ọ bụ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania nwe ihe niile dị ebe a, ọ gwụkwala ma ò nwere nke ha kwuru na ha si ebe ọzọ nweta.
Akara Ndị I Nwere Ike Ịhụ
Adobe, akara Adobe, Acrobat, na akara Acrobat bụ ihe ndị e ji mara ụlọ ọrụ a na-akpọ Adobe Systems Incorporated. iTunes na iPod bụ akara e ji mara ụlọ ọrụ Apple Inc. Akara ndị ọzọ i nwekwara ike ịhụ ebe a bụ ihe iwu kwadoro e ji mara ndị nwe ha.
Ihe Ndị I Nwere Ike Ime na Ihe Ndị Ị Na-agaghị Eme na jw.org
Ihe e dere ebe a bụ ihe ndị i nwere ike ime na ihe ndị ị na-agaghị eme na jw.org a. Ọ bụrụ na ị na-aga na jw.org eme ihe ọ bụla na ya, ọ pụtara na i kwetara ihe niile e kwuru ebe a. Ọ bụrụ na i kwetaghị, agala na jw.org eme ihe ọ bụla.
Olee ihe ndị i nwere ike ime na jw.org? I nwere ike ibipụta akwụkwọ na foto ndị e nyere gị ikike ibipụta, geekwa abụ ma lee vidio. I nwekwara ike iwere ha tinye na kọmputa gị ma ọ bụ n’ekwentị gị ma ọ bụkwanụ n’ihe ndị ọzọ. Ma, ị gaghị ere ihe ọ bụla i si na jw.org were. O nwekwara ihe ndị ọzọ ị na-agaghị eme. Ị gaghị:
Etinye ihe i wetara na jw.org n’ebe ọ bụla ọzọ n’Ịntanet;
Ewere ihe ndị i wetara na jw.org tinyeghachi n’Ịntanet n’aha gị ma ọ bụ jiri ha mepụta ihe a ga-eji na-arụ ọrụ na kọmputa;
Emepụtaghachi ihe dị na jw.org ma ọ bụkwanụ were ya na-eresị ndị ọzọ, ọ sọgodị ya ya bụrụ na o nweghị uru ị na-enweta na ya. Ị gaghịkwa na-ekesara ndị mmadụ ihe ha ga-eji na-arụ ọrụ na kọmputa nke nwere ihe jikọrọ ya na jw.org, ma ọ bụ nke na-ebuga mmadụ na jw.org;
Aga na jw.org ka i si na ya mepụta akara ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ị ga-eji were ihe ndị ị na-ekwesịghị iwere na jw.org, ma ọ bụkwanụ na-ekesara ọhaneze akara ndị ahụ;
Aga na jw.org mee ihe ị na-ekwesịghị ime na ya, ma ọ bụ gaa na ya were ihe otú a na-emeghị ka e si na-aga na ya ewere ihe;
Eme ihe ọ bụla ga-emebi jw.org, ma ọ bụ nke ga-eme ka ọ na-esi ike ịga na ya, ma ọ bụkwanụ nke ga-eme ka ndị mmadụ gharazie inwe ike ịna-aga na ya. Ị gaghịkwa aga na ya mee ihe ọ bụla iwu na-akwadoghị, ma ọ bụ gwuo wayo, ma ọ bụ gaa na ya mee ihe ọ bụla nwere otú o si gbasa ihe iwu na-akwadoghị ma ọ bụ nke nwere otú o si gbasa igwu wayo;
Aga na jw.org iji mee ihe ọ bụla nwere otú o si gbasa azụmahịa.
Gịnị Ga-eme Ma I Mee Ihe Ndị A A Sị Gị Emela?
Ọ bụrụ na i mee nke ọ bụla n’ime ihe ndị a a sị gị emela, ndị nwe jw.org, ya bụ Watchtower, ga-eme gị ihe ọ bụla ha chere kwesịrị ekwesị ka e mee gị. Ha nwere ike ịmachi gị ịna-aga na jw.org ruo oge ụfọdụ, ma ọ bụ machie gị kpamkpam ịna-aga na ya, ma ọ bụ machie kọmputa ọ bụla ọzọ iji Ịntanet gị aga na jw.org, ma ọ bụ gwa ndị na-enye gị ikike ịga n’Ịntanet ka ha napụ gị ikike ịga na jw.org, ma ọ bụkwanụ gbaa gị akwụkwọ n’ụlọikpe.
Ịgbanwe Ihe E Kwuru
Watchtower nwere ike ịnọtụ gbanwee ihe ndị i nwere ike ime na ihe ndị ị na-agaghị eme na jw.org. A gbanwee ha, iwu ji gị ibido ụbọchị e tinyere ha ebe a mewe ha. Biko, na-abịa ebe a mgbe niile ka ị mata mgbe a gbanwere ihe.
Ebe Iwu Na-achị Ihe E Kwuru Ebe A Gbakwasịrị Ụkwụ
Ọ bụ iwu Steeti Niu Yọk dị n’Amerịka na-achị ihe niile e kwuru ebe a, ọ bụkwa ha ga-akọwa ihe ihe ọ bụla e kwuru ebe a pụtara n’agbanyeghị ihe iwu ọ bụla ọzọ nwere ike ikwu. Ọ bụ ụlọikpe steeti ma ọ bụ nke etiti, nke nwere ike ikpebi ikpe na Steeti Niu Yọk, dị n’Amerịka, ga-eleba anya n’okwu ikpe ọ bụla gbasara iwu e nyere ebe a.
Otu Iwu A Kagburu Agaghị Agbasa Iwu Ndị Ọzọ
Ọ bụrụ na ụlọikpe iwu kwadoro ekwuo na o nwere nke na-adabaghị adaba n’ime iwu ndị anyị tiri ebe a, ma ọ bụ nke ọ na-enweghị ihe a ga-eme onye dara ya, ma ọ bụkwanụ nke megidere iwu obodo, ọ gaghị agbasa iwu ndị ọzọ dị ebe a. Ọ bụrụ na Watchtower enweghị ihe ha mere onye dara nke ọ bụla n’ime iwu ndị a, ọ pụtaghị na ha akagbuola iwu ahụ, ma ọ bụ na ha enweghịzi ikike ime onye ahụ ihe ọ bụla.
Ihe Niile Gị na Watchtower Kwekọrịtara
Ihe niile e dere ebe a bụ ihe gị na Watchtower kwekọrịtara gbasara ịga na jw.org eme ihe ọ bụla. Anyị jikwa ihe niile e kwuru ebe a dochie ihe niile anyị kwuburu gbasara ịga na jw.org.